श्रीमान विदेश गएपछि बिबाहित महिला ग’र्भनिरोधी औषधि लिन अस्पताल जाँदा जे भयो! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > श्रीमान विदेश गएपछि बिबाहित महिला ग’र्भनिरोधी औषधि लिन अस्पताल जाँदा जे भयो!
admin October 3, 2020 जीवनशैली, समाज	0
एजेन्सी । मुना केसी नाम परिवर्तन गरेएकि एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता महिला अहिले खुबै हाम्रो समाजमा भइरहेका विषयमा खुलासा गरिरहेकी छिन् । उनका कुरामा धेरै मात्रामा सत्यता छ । यसैले उनीसँग जोडिएका अरु सामाजिक प्रयोगकर्ता उनको समर्थनमा देखिन्छन् ।उनी कहिले के त कहिले के विषयमा समाजको चित्रण गरिरहन्छिन् ।
त्यही क्रममा उनी लेख्छिन् श्रीमान विदेश गएको केही अन्तर पछि प्राय बिबाहित महिलाहरु ग’र्भनिरोधी औषधिहरु र ग’र्भनिरोधको अस्थाई उपकरणका साधन हरु अप्नाउन हस्पिटल आउँनि गरेको पाउँछु । त्यसैले बिबाहित महिलाहरुले ग’र्भनिरोधी उपकरणहरु अप्नाउनु परेमा आफ्नु श्रीमानपनि सँगै हस्पिटल ल्याउनुपर्ने सिस्टमको आवश्यक देख्छु म । उनको यो लेखाईमा धेरैले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
धेरैले उनको लेखाईमा सत्यता रहेको बताएका छन् । उनी आफु पेसाले डाक्टर भएको बताउँछिन् । यसैले उनले अस्पतालमा देख्ने गरेको सत्य कुरा नै लेख्ने गरेको दावी गर्दै आएकी छिन् । उनको यो पोष्टमा निक्कै ठूलो बहस भएको देखिन्छ । उनको विपक्षमापनि धेरै उत्रिएका छन् । गलत विचार बोकेको, डाक्टर भएर समाजको इन्जिनियर बन्न खोजेको अनेकौ आरोप उनलाई लागेको छ । तरपनि उनले समाजका लागि लेख्न नछोड्ने र समाज सुध्रिनुपर्ने दावी गर्दै आएकी छिन् । लाइभ१८नेपाल डटकमबाट साभार गरिएको ।
श्रीमान र गाउँलहरूले कपाल मुण्डन बनाएर नि‘र्घात कु’टिरहे… छोरीहरू निरिह रोइरहे…
इजरायलबाट क्यान्सर पीडित मिना राईको उपचारका लागि गर्यो सहयोग (भिडियो सहित)
मृ त्युडण्डबाट बचेर अरबबाट फर्किएका उमेश घर पुग्दा श्रीमतिकाे यस्तो बेहाल… हेर्नुहाेस्